Nhau - CIAAR 2020 【Exhibition Live】
Musi waNovember 12, 2020, iyo 18th Shanghai International Automotive Mhepo Inodzora uye Refriji Technology Exhibition yakavhurwa kwazvo. With kukurumidza kukura China kuti motokari indasitiri, Chinese Mobile Refrigeration indasitiri ari kuratidza kukurumidza kukura muitiro. Ose hukama kubva kugadzirwa, kutengesa kune mushure-kutengesa kuri kuwedzera kukura. Izvo zvinodiwa nenyika zvepasi-kabhoni uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza zvigadzirwa zvemaindasitiri zviri kuramba zvichivandudzika, izvo zvinomhanyisa hunyanzvi hwezvigadzirwa zvebhizimusi uye kusimudzira kwemaindasitiri.
Iyo Shanghai International Automotive Mhepo Inodzora uye Refrigeration Technology Exhibition iri yakanaka indasitiri ruzivo kutaurirana zambuko, kuunza tekinoroji kugovana kwemotokari dzemotokari zvigadzirwa zvemuchina. Kubva pazvinhu zvetekinoroji migwagwa uye indasitiri yekushandisa tarisiro, zvinonzwisisika uye zvakadzama zvinotsanangudza pamberi-pekutarisa maonero mumunda wezvimotokari mweya-kutonhodza zvigadzirwa. Vanhu vari mundima iyi vakawana zvakare kudzidza nekudyidzana pano kuitira kuti vanhu vawedzere bhizinesi ravo.
Kambani yedu yakapinda muchikamu cheShanghai International Automotive Mhepo Inodzora uye Refrigeration Technology Exhibition kwemakore mazhinji nemotokari yemhepo inotonhodza compressor zvigadzirwa. Munharaunda yakajairika yedenda iri, vatengi vazhinji vekumba nevekunze vaive vachiri kukwezva neichi chiratidziro mumazuva matatu. Mukutaurirana navo, tsika yekambani yakaunzwa, mufananidzo wekambani uye zvigadzirwa zvitsva zvakaratidzwa, uye vatengi vakakokwa kuti vashanyire fekitori uye vatizive isu zvakadzama kusimudzira kuvimba kwevatengi muchiratidzo uye kusimbisa kuvimba kwe vatengi kukambani yedu. Kuti usarudze zvakakodzera zvigadzirwa zvevatengi uye uve nechokwadi chemhando yebasa, isu tinogadzira zvigadzirwa uye tinowirirana nevatengi panzvimbo yekuratidzira, shandisa zviito zvinoshanda kugadzirisa zvinetso zvevatengi uye kusangana nezvinodiwa nevatengi.
Nzvimbo yekuratidzira yaive izere nemapoka uye yaive mukutenderera kuzere. Paive nerukova rusingaperi rwevatengi pa1J02 dumba, uye paive nevatengi vazhinji vaibvunza. Kugamuchirwa kwedu kwoushamwari, tsananguro yokungwarira yemotokari yedu yekugadzirisa zvinhu compressor zvigadzirwa, uye docking inoshanda yakunda kufarirwa nevatengi vazhinji. Ngatiendei zvakananga kunzvimbo yekuratidzira!
Post nguva: Jun-10-2021